बिहे गरेर लगेको त्यो रात, जब श्रीमानले ‘सम्बन्ध’ राख्न मानेनन्…. – Sanjal Nepal
Homeसमाचारबिहे गरेर लगेको त्यो रात, जब श्रीमानले ‘सम्बन्ध’ राख्न मानेनन्….
February 9, 2021 admin समाचार 8750
लामो समयको गहिरो प्रेमपछि देवको विवाहको प्रस्ताव अनुजाले नकार्न सकिनन्। हिँडदा, उठ्दा, बस्दा उनलाई देवकै याद आउँथ्यो। त्यसमा पनि मिलेको जिउडाल, कपालको स्टाइलले अनुजानको मन देवतिर तानिकएको थियो। देवले बारम्बार अनुजासँग बिहेको प्रस्ताव गरिरहे।
देवले शुक्लाफाँटा नगरपालिका–४ असैनामा डेरा गरेर बस्दै आएको घरमा अनुजालाई भित्र्याए। तर बिहे गरी ल्याएको पहिलो रात मात्र अनुजाले थाहा पाइन् देव त देविका रहेछिन्। अर्थात् देव केटा नभएर केटी भएको उनले थाहा पाइन्।
स‍ँगै सुत्दासमेत शा’री-रि’क स-म्बन्ध नराख्ने र पछि हट्न थालेपछि अनुजाले यसबारे थाहा थाएकी थिइन्। ‘म पनि केटी नै हुँ भनेर देवले स्विकारेपछि मात्र अनुजाले माइतीलाई यसबारे जानकारी गराइन्। रुँदै अभिभावकलाई अनुजाले देवबारे सबै बताएपछि उनका माइती सबैको हो’ससमेत उ’ड्यो।
अभिभावकले यसबारे इलाका प्रहरी कार्यालय झलारीमा झुक्यानमा पारेर विवाह गरेर ल्याएको उजुरी दिए। प्रहरीले देव र अनुजालाई सँगै राखेर कुरा गरेपछि यसबारे अझ खुल्न आएको हो।
देवकीको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रहरी निरीक्षक बोहराले भने, ‘सबै थोक दिन सक्छु तर शा’री-रिक सु’खभो-ग दिन सक्दिनँ भनेर सबैसामु भनेका छन्। उनको भनाइले पनि उनी केटा चै होइनन्।’ उनका परिवारका अनुसार सानैदेखि देवकीले केटी भएर पनि केटाकै हाउभाउ देखाउने गरेका थिए।
टिकटकमा भाइरल भएको बिमल डाँगीले गाएको सबैलाई रूहाउने गीत ‘धर्ति आकाश’ को भिडियो यस्तो बन्यो !
January 1, 2021 admin समाचार 1487
नेपाली लोक दोहोरी क्षेत्रका लोकप्रिय गायक बिमल डाँगीले आवाज दिएका धेरै गीतहरु यो बर्ष लगातार बजारमा आइरहेको छ। सोहि क्रममा कुमारी बुढा मगरको अत्यन्त मनछुने गीत “धर्ति आकाश” बोलको गीत गीत पनि भर्खरै बजारमा आएको
January 3, 2021 admin समाचार 1639
December 23, 2020 admin समाचार 1288
LEX 18 agenda conversation: Job club (486399)
सञ्जेललाई कुटपिट गर्ने कर्मचारी बर्खास्त, अभद्र व्यवहार मुद्दामा म्याद थप (458504)
Hello world! (384506)
A above Googler and career teach says you shouldn’t at all times flip your ardour intoaabounding-time job (352013)